Vaovao - LAVITRA MAFANA—Andiam-panafana vata kely
6L/8L vata fampangatsiahana mini ho an'ny efitra fatoriana, fiara, birao birao & College Dorm Room -110v/220v Portable Mangatsiaka & mafana ho an'ny sakafo, zava-pisotro, Skincare & Beauty.
Asa mangatsiaka sy mafana kokoa.Ny vata fampangatsiahana mini dia vita amin'ny moelectric core.Ny fototry ny vata fampangatsiahanay dia maharitra ela avy amin'ny orinasa Japoney.Miova arakaraka ny tontolo manodidina ny maripana ao anatiny.Amin'ny ankapobeny dia milaza fa 18-20 degre ambony na ambany noho ny ambient mari-pana, ny ambany indrindra mety hahatratra 0 degre, ary ny ambony indrindra mety hahatratra 65 degre.Mitahiry vokatra fikarakarana hoditra mangatsiaka ary hanome fika tsara tarehy mamy mba hahatonga ny hoditrao ho tsara tarehy isan'andro.Ho hitanao fa tsy vitan'ny hoe mora kokoa izy io, fa mety kokoa ary mendrika ny manandrana.Azo ampiasaina hanafanana tavoahangin-jaza ihany koa izy io, fa tsy azo ampiasaina hanafanana sakafo.Pls ataovy azo antoka fa adiny 1 sisa ny fotoana hifindrana eo amin'ny fomba mafana sy mangatsiaka.
Portable & Compact.Azo ahetsiketsika tsara satria mora entina.Azo ampiasaina amin'ny trano fatoriana, toby, fitsangantsanganana, sns. Seho bebe kokoa miandry ny fahitanao.
TRANO SY FIARA（AC & DC）.Azonao atao ny mametraka ny latabatra fisoloana akanjo ao amin'ny efitrano fatoriana ao an-trano, ary azonao atao koa ny mampitony ny zava-pisotro ao anaty fiara.
LEDfitaratraDesign. Ny endrika miavaka amin'ny jiro LED sy ny habaka dia azo ampiasaina tsara.Hitanao mazava tsara ny tavanao ao anaty haizina miaraka amin'ny jiro LED, mitsitsy angovo ihany koa izy io.Ny famolavolana habaka misy sosona roa anatiny dia azo sokajiana sy voatahiry tsara kokoa.Ny efitra fitehirizana ao anaty varavarana dia azo ampiasaina hametrahana saron-tava, lokomena, sns.
SILENT SOUND DESIGN.Ny feo miasa amin'ny vata fampangatsiahana dia 28LB ihany.Ny fametrahana azy eo amin'ny efitrano fatoriana dia tsy hanelingelina ny torimasonao amin'ny alina.Raha tsy matory maivana be ianao dia afaka miala amin'ny efitrano fatoriana.
4L fitaratraamin'ny alalan'ny
Ny vata fampangatsiahana kely indrindra nefa mahafatifaty indrindra dia fitahirizana 4L.Mamela anao hitahiry ny vokatra rehetra ilainao amin'ny fikarakarana hoditra amin'ny toerana iray izy io.
Manana fiasa manokana izy io
1) Misy toerana mafana sy mangatsiaka
2) Talantalana azo mihetsika
3) Mampihena ny bakteria tsy ho eo
4) Manalefaka sy manala ny hoditra
5) Mampihena ny menaka ary manamaivana ny mony
6) Ary misy loko maro!
Tsy adino ny endri-javatra, tonga miaraka amin'ny tantana varavarana latch, tantana anatiny, talantalana 1 azo esorina ary 1 azo alaina!
vata fampangatsiahana marbra
Ny vata fampangatsiahana vaovao vita amin'ny marbra vita amin'ny varavarana dia mitazona ny vokatra fikarakarana hoditra rehetra ho hahomby kokoa ary mandamina ny habaka hatsaranao ho toy ny taloha!Ataovy madio sy mangatsiaka ny vokatrao.
1) 8L & 10L, 22L fahafahana misy
2) Toerana mafana sy mangatsiaka
3) talantalana azo esorina
4) Lovia 1 varavarana
5) Mitondra tantana naorina
6) Varavarana misy fitaratra mipetaka amin'ny alàlan'ny jiro LED misy olana
7) 3 karazana famirapiratana Adjustable
Mamirapiratra ny zava-poana, ny efitra fatoriana, ny efitra fandroana na na aiza na aiza!Ahitana vata fampangatsiahana hatsaran-tarehy 8L sy 4L.
Fotoana fandefasana: Nov-02-2021